cyber crime(cyber crime) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ । इन्टरनेटको युगमा हरेक दिन साइबर अपराध भइरहेका छन्। साइबर अपराधीहरुले मानिसलाई ठगी गर्न लगातार नयाँ–नयाँ चालहरु चलिरहेका छन्। साइबर संसारमा केही यस्ता अपराध पनि भएका छन्, जसले संसारलाई हल्लाएको छ। यहाँ हामी अनलाइन ठगी र ई–मेलसँग सम्बन्धित केही यस्ता अपराधबारे चर्चा गर्नेछौँ। बिजनेस ई–मेल स्क्याम बिजनेस ई–मेल...
सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगीधन्दा मौलायो, सचेत रहन साइबर ब्युरोको आग्रह
काठमाण्डौ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेकोले सचेत रहन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीका घटनाहरु बढ्न थालेपछि साइबर ब्युरोले आज एक सूचना जारी गर्दै सर्वसाधारणलाई सचेत गराएको हो। केही व्यक्ति तथा आपराधिक समूहले सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएप, भाइबर,...
बाल साइबर सुरक्षासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी, यस्तो छ जोखिमको अवस्था
ललितपुर । सुरक्षित इन्टरनेट दिवस २०२१ को अवसरमा चाइल्डसेफनेट र युनिसेफ नेपालले बालबालिका र युवाको अनलाइन सुरक्षाबारे एक श्वेतपत्र प्रकाशित गरेको छ। बालबालिका र युवाको इन्टरनेट प्रयोगका साथै उनीहरूमाथि हुने अनलाइन जोखिम, दुर्व्यवहार र शोषणबारे विस्तृत जानकारी समावेश श्वेतपत्र युनिसेफ नेपालको सहयोगमा बालबालिका र युवाहरूका लागि...
सामाजिक सञ्जालको बढ्यो प्रयोगले 'इमेल फिसिङ'का घटना पनि उच्च, रु. १ करोडसम्म ठगी
– अच्युत रेग्मी काठमाण्डौ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै नयाँ तरिकाबाट साइबर अपराध हुने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै फेसबुक, ट्वीटर, भाइवर, गुगलजस्ता सञ्जालमा नयाँ खाता खोलेर मानिसले पैसा लुट्ने र अर्को व्यक्तिको हैसियत सिध्याउने घटना बढेर गएको हो । पछिल्लो समय ‘इमेल फिसिङ’ मार्फत करोडौँ रुपैयाँ ठगी हुने गरेको...
पैसा कमाउने लोभमा ठगिँदैछन् विदेशका नेपाली, जोगिन के गर्ने ?
-प्रकाश बञ्जारा युएई । धेरैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ र चितवनका राजेशलाई पनि अचानक आएको फोनबाट अपरिचित व्यक्तिले डु टेलिकमको प्रतिनिधित्व गर्दै २ मिलियन अमेरिकि डलर बराबरको भाग्यशाली चिठ्ठामा उनको मोवाइल नम्बर परेको भन्दै फोन गर्दा यस्तै भयो । शुरुमा त उनले पत्याउन सकेनन्, तर उताबाट पत्याउन सक्ने तरिकाबाट सम्झाइयो र पत्याउन बाध्य...